Maxaa ka dhexeeya Calanka Soomaalida iyo kan Mareeykanka.? – Balcad.com Teyteyleey
Gobaladan ayaa si ay uga xuroobaan gumeeysigii kala xakumayaya Gobaladda mareeykanka oo aan markaa mideeysneeyn ,sida Gumeeysta yaashii: Spain, UK, iyo Farance waxa ay sameeystay Calan ay ku dagaalamaan, qaar ayaa u sameeystay in ay diidaan ku biiridda midawgii mareeykanka oo doonayay in ay iskood u noqdaan qaran jira. Sawirka 3aad jamhuuriyada koofurta Florida& 4 asaga oo ka dhax muuqda midawgii mareeykanka markii qolaba calankeeda wadatay.
FG: wax waa iga khaldami karaan, waxna waa hilmaami karaa ee wixii intaa If you are in need of economic solutions for your Imitrex purchase, you can find them at our store, as we sell it for only 6.05 USD! Act today and don’t miss your chance! ka badan weeydii khubarada taariikhda.